၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် | Save Burma
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
Tagged with ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း, ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကို, ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို�
« World focus on Burma (19 July 2008)
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တဲ့ မြန်မာစစ်သည်တိုင်းက စံနမူနာ ထားအပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း »
Pictures (10): Burma's cyclone disaster
ဦးဝင်းတင် - အင်တာဗျူးများ
စည်းအပြင်က လူ (Outcast) March 24, 2018
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့အတွက် Mizzima TV ရဲ့ ရုပ်သံလိုင်း အစီအစဉ်များ March 23, 2018
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ထုတ် မဇ္ဈိမ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး March 23, 2018
ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းက စူပါမားကတ်တွင် အစွန်းရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံး March 23, 2018
မက္ကဆီကို နယ်ခြားတံတိုင်း ရန်ပုံငွေဘတ်ဂျက်အား အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် အတည်ပြု March 23, 2018
မွန်အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီးစီး March 23, 2018
နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတာ အနုပညာရှင်များ စဉ်းစားစေချင်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား March 23, 2018
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး ဗီယက်နမ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့ တွန်းအားပေး March 23, 2018
ရိုဟင်ဂျာအရေး ကန် အောက်လွှတ်တော်မှာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
သမ္မတအရည်အချင်း စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
သီပေါမှာ ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်တိုးလာနေ
NCA ထိုးတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို မွန်လွှတ်တော် ကြိုဆို
အောင်လအန်ဆန်း ကို ကချင်အစိုးရ ဂုဏ်ပြု
Gunman shot dead in France after killing3in supermarket, car attacks March 24, 2018
Report: 'ISIS-inspired' incident in France market March 23, 2018
Britain won't make its new Brexit passports. Guess who will? March 22, 2018
This airport will fly you to the terminal for $65 March 5, 2018
Ailing parents get one last family adventure March 22, 2018
New Platform Will Support Youth Projects on Water and Climate March 23, 2018
Role of Energy Efficiency in Limiting Climate Change March 23, 2018
UN Migration Agency Appeals for USD 88.5 Million for Response to Ethiopian Crisis March 23, 2018
Working Together Is Key to Meeting Water Targets by 2030 March 22, 2018
Writers Talk Literary Activism at Paris Book Fair March 22, 2018
Executive Director of the Bahraini Diplomatic Institute visits the Geneva Centre March 22, 2018
A New Low for Security Council as Russia Takes Syrian Human Rights Off the Table March 22, 2018
Water and Migration: Implications for Policy Makers March 22, 2018